tiswir Molde 1904
Waa heshiis degenaansho ah oo soo baxay sidii boosteejo ganacsi ee qarniyadii dhexe. Xuquuqda rasmiga ah ee ganacsiga waxaa la soo saaray 1614, magaaladana waxaa lagu dhexdhexaadiyay xeerka boqortooyadii 1742. Molde waxaa loo asaasay degmada 1 January 1838 (fiiri formannskapsdistrikt) Magaaladu waxay sii waday koritaanka qarniyadii 18aad iyo 19aad, waxay noqotay xarun tiknoolajiyada iyo dhar-dhaqashada norwiijiga, iyo sidoo kale xarunta maamulka ee gobolka, iyo meel dalxiis weyn ah. Kadib Dagaalkii Dunida II, Molde waxay kobcisay koboc dhaqaale, oo ay la midoobeen degmada Bolsøy iyo qaybo ka mid ah degmada Veøy 1dii Janaayo 1964, waxayna noqotay xarun aan ahayn adeegyo maamul iyo dawladeed oo keliya, laakiin sidoo kale ilaha tacliinta iyo wax soosaarka warshadaha. Degmada 363-kiiloomitir-kiilomitir (140 sq mi) waa degmada 254aad ee ugu ballaaran oo ka baxsan 422 degmo oo Norway ah. Molde waa degmada 38aad ee ugu badan ee ku nool Norway oo leh dad gaaraya 26,822. Cufnaanta dadweynaha degmada waa 75.4 qof oo halkii kilomitir oo isku wareeg ah (195 / sq mi), dadkuna waxay kor u kaceen 10.6% tobankii sano ee la soo dhaafay.
sido kael fiiri[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Molde_(town)&oldid=205979"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Sebteembar 2020, marka ee eheed 16:12.